Ahoana ny fomba fanamboarana milina fanaovana tatoazy vita an-trano - Ikkaro
firosoana >> Cómo hacer >> Fomba fanamboarana milina fanaovana tatoazy an-trano
Gaga aho nahita ny isan'ny horonan-tsary momba izany ny fomba fanaovana masinina tatoazy namboarina.
Sendra sendra ny lohahevitra tao amin'ny youtube aho, nanao fikarohana tao amin'ny milina atwood, Tiako ilay hevitra ary nanomboka nanadihady aho.
Raha ny marina, na dia betsaka aza ny horonan-tsary, ny ankamaroany dia fiovan'ny hevitra mitovy amin'izay hitanao amin'ireo horonan-tsary avelantsika.
Ny milina fanaovana tombokavatsa misy avadiho ho lasa mihetsika ny fihodinan'ny moteraNoho izany dia mampiasa motera 4,5 V DC izahay ary mamorona fitambarana izay hametahana tariby na tohana ara-pitantanana.
Tsy tokony hamporisihiko hampiasa an'ireny milina fanaovana tombokavatsa ireny ianao, fa raha hanao izany ianao dia mba karakarao araka izay azo atao ny fahadiovana ary ampiasao ny fanjaitra novidiana tao amin'ny fivarotam-panafody.
Ho hitanao mazava kokoa ao amin'ity horonan-tsary manaraka ity.
Ity dia homemade tsara tarehy. ny milina tatoazy mandroso kely kokoa, izay nametrahan'izy ireo potentiometra ary nanandrana nampihena ny fanodikodinana ny hetsika hafa, azonao izany eto.
Fa amin'ny farany dia mitovy ihany ny fiandohana.
Ary raha mahazo ny bibikely mahita masinina matihanina ianao, dia mamela anao patanty amerikana roa ho anao ao anatin'ireo kambana basy ho an'ny fanaovana tatoazy.